မြန်မာ့ပြည်တွင်းစစ်ကိုတားဆီးနိုင်အောင် အရေးယူဖို့ ကုလကိုယ်စားလှယ်တိုက်တွန်း — မြန်မာဌာန
မြန်မာ့ပြည်တွင်းစစ်ကိုတားဆီးနိုင်အောင် အရေးယူဖို့ ကုလကိုယ်စားလှယ်တိုက်တွန်း
မြန်မာ့အရေး ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ လုံခြုံရေးကောင်စီအရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာ - ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Christine Burgener က - ထိရောက်တဲ့ အရေးယူမှုတွေလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင် ၁၅ နိုင်ငံကနေ တံခါးပိတ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး၊ အထူးကိုယ်စားလှယ် Christine Burgener အစီရင်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ လိုလားတဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေအပေါ် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ဥပဒေမဲ့ ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုတွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ သွေးချောင်းစီးတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့ Christine Burgener က သတိပေးခဲ့တာပါ။
ဒါကြောင့် တညီတညွတ်တည်း အရေးယူနိုင်အောင် တတ်နိုင်သမျှ နည်းလမ်းတွေကို လုံခြုံရေးကောင်စီက စဉ်းစားဖို့ကိုလည်း အထူးကိုယ်စားလှယ်က တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်း တံခါးပိတ်အစည်းအဝေးမှာ ပြောဆိုခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းကို ကိုးကားပြီး AFP သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ ရက်စက်မှုတွေဟာ ဆိုးရွားလွန်းလို့ မခံမရပ်နိုင်ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်း ဆန့်ကျင်လာတာကြောင့် ပြည်တွင်းစစ်မီးဟာ အရင်နဲ့ မတူအောင် ကြီးထွားလာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့လည်း Christine Burgener က သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီပြဿနာကို အချိန်မီ မဟန့်တားနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ရေရှည်ကျရင် ကမ္ဘာကြီးကိုပါ ထိခိုက်လာနိုင်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် အိမ်နီးချင်းနဲ့ ဒေသတွင်းကို ရိုက်ခတ်လာနိုင်ကြောင်းလည်း Christine Burgener က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ ဒီလုံခြုံရေးကောင်စီ အရေးပေါ် အစည်းအဝေးမတိုင်ခင် အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူထားတဲ့ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Linda Thomas-Greenfield က မြန်မာ့အရေးကို လုံခြုံရေးကောင်စီက ဒီထက်ပို အားစိုက်လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုတယ်လို့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
“ကျမတို့ရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုတွေကို ၂ ဆတိုး လုပ်ရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီနေ့နှောင်းပိုင်းမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ် သက်လို့ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ ဆွေးနွေးဖို့ ရှိနေပြီး၊ ဘာတွေလုပ်နိုင်တာ ရှိမလဲဆိုတာတွေကို နည်းလမ်း ရှာကြမှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်က ပြည်သူတွေအပေါ် လုပ်နေတဲ့ လုပ်ရပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောရ မယ်ဆိုရင် ကလေးတွေအပေါ် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာ၊ သတ်ဖြတ်တာတွေဟာ တုန်လှုပ်စရာပါ။ လက်ခံ နိုင်စရာလည်း မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီတိုင်း ရပ်ကြည့်နေလို့ မဖြစ်ဘဲ ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။”
အမေရိကန်က ဒီတပတ်ထဲမှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ကုန်သွယ်မှုတွေ ရပ်ဆိုင်းလိုက်တဲ့ကိစ္စကိုလည်း ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားသလို၊ နောက်ထပ် ဖိအားပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကိုလည်း ဆက်လက်ရှာဖွေသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောဆိုခဲ့တာပါ။
“အရပ်သားတွေအပေါ် တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဆက်လုပ်နေမယ် ဆိုရင်တော့ နောက်ထပ်လုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေ ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုတော့ လောလောဆယ် မပြောနိုင် သေးပေမဲ့၊ ဘေးဖယ်ထားမယ့် ကိစ္စမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။”
လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ အမေရိကန် အပါအဝင် အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ အဆိုပြုချက်တွေကို မကြာခဏ အတိုက်အခံ လုပ်လေ့ရှိတဲ့ တရုတ်၊ ရုရှားနိုင်ငံတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း သံအမတ်ကြီးက - မတူကွဲပြားတဲ့ သဘောထားတွေ ရှိနေပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင် အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေမှာတော့ ဘုံရပ်တည်ချက်ရအောင် ညှိနှိုင်းကြိုးပမ်းမှုတွေ ရှိတယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ၁ လကျော်အကြာ မတ်လ ၁ဝ ရက်နေ့မှာမှ အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုံခြုံရေးကောင်စီက ပထမဆုံး ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့တာပါ။ ဒါတောင် “အာဏာသိမ်းမှု” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အသုံးပြုဖို့နဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို နိုင်ငံတကာက နောက်ထပ် အရေးယူမှုတွေ လုပ်ကောင်းလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အချက် ၂ ချက်အပေါ်မှာ လုံခြုံရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်တွေအကြား အထူးသဖြင့် ရုရှားနဲ့ တရုတ်ရဲ့ ကန့်ကွက်မှုကြောင့် သဘောတူညီမှု မရခဲ့ကြဘူးဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
RFA ကနေ သီးခြားပြုစုထားတဲ့စာရင်းအရ အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက် အာဏာသိမ်းပြီး ကတည်းက စစ်တပ်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ဥပဒေမဲ့ ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုတွေကြောင့် နိုင်ငံအနှံ့မှာ သေဆုံးသူ အနည်းဆုံး ၅ဝဝ ကျော် ရှိသွားပါပြီ။ ဒီအထဲမှာ ပိုင်ရှင်မဲ့နဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ သယ်သွားတဲ့ သေဆုံးသူစာရင်းတွေ မပါဝင်တာကြောင့် ဒီ့ထက်မက များနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) က ပြုစုထားတဲ့ စာရင်းမှာတော့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ သေဆုံးသူစုစုပေါင်း ၅၃၆ ဦး ရှိပါတယ်။
မြန်မာစစ်တပ်ကို အားပေးမှု ပြင်သစ် Thales ကုမ္ပဏီကို အရေးယူဖို့ တောင်းဆို
ရန်ကုန် ဘတ်စ်ကားသပိတ် ဘယ်လောက် အောင်မြင်မှုရနေလဲ
On behalf of me and other patriots, I would like to tell Ms. Christine Burgener that there will beanew civil war that is unprecedented if there is any action against the present Tatmadaw in Burma. Period.
The UN is nothing can do for take action to the Military coup cause of China and Russia